काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भयो।
करिब ३ सय वकिलले वकालतनामा लेखाएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सुरुमै बहस गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही संविधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको भए त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको व्याख्या गरे। थापाले प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान भए मात्रै प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्भव हुने तर्क गरेका छन्।
उनले भने, ‘म नयाँ कुरा गर्छु भन्ने होइन’ यत्रो इजलासबाट संविधान पल्टाएर श्रीमानहरूबाट जिज्ञासा आइरहेको छ। संविधान त त्यही हो निु’। प्रधानमन्त्रीसँग अर्कै संविधान छ र ? संविधानसभाका अध्यक्षसँग अर्कै संविधान छ र ?
थापाले बहसका क्रममा नेपालमा एउटै संविधान भए पनि पद र सत्तामा पुगेपछि आफूखुसी व्याख्या हुने गरेको भन्दै व्यंग्य गरे।
‘हामीसँग संविधान एउटै छ। तर फरक फरक व्याख्या भइरहेको छ। संविधान एउटै भएपनि पदमा पुगेपछि फरक -फरक व्याख्या भइरहेको छ, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘एउटै संविधान हो। मैले भन्ने चाहिँ संविधानले बेला बेला बोली फेर्नु भएन भन्ने मात्र हो।’
थापाले बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलमाथि पनि कटाक्ष गरे। उनले महान्यायाधिवक्ता हुँदा एउटा र कानून मन्त्री हुँदा संविधानको अर्को व्याख्या गर्न नहुने सुझाव दिए।